Ny famandrihana lalao video manetry tena dia hanary ny fanohanana Mac | avy amin'ny mac aho
Ny famandrihana lalao video manetry tena dia hanakana ny fanohanan'ny Mac
Ignatius Room | | Mac OS X, About us
Ny Humble dia iray amin'ireo sehatra vitsivitsy azo alaina amin'ny Mac izay manolotra serivisy famandrihana isam-bolana ho takalon'ny fidirana amin'ny lalao video marobe, sehatra izay misy ihany koa ho an'ny Windows sy Linux.
Na izany aza, araka ny nambaran'ny orinasa tamin'ny mailaka nalefany ho an'ny mpanjifany rehetra, manomboka amin'ny 1 Janoary, dia hamoaka modely fandraharahana vaovao izay mitaky fampiharana vaovao, fampiharana vaovao izay Ho an'ny Windows ihany izy io.
Amin'izany fomba izany dia hanary ny fanohanana ho an'ny Linux sy macOS. Ny Humble Choice dia manome ny mpanjifa miditra amin'ny lalao 10 voafantina izay azony tazonina mandrakizay.
Hatramin'izao, ity sehatra ity dia nanolotra drafitra famandrihana samihafa. Na izany aza, tamin'ny 1 Febroary, hampihena ny drafitra rehetra ho iray ary ho an'ny Windows ihany izy io, vaovao iray izay manimba ny fifandraisan'ny macOS sy ny lalao fotsiny.
Araka ny azontsika vakiana amin'ny mailaka izay nalefa ho an'ny mpampiasa rehetra an'ity sehatra ity, via Neowin:
Te-hampahafantatra anao izahay fa manomboka amin'ny 1 Febroary dia tsy ho hita intsony ny dikan-teny Mac sy Linux amin'ny lalao tsy misy DRM amin'izao fotoana izao ao amin'ny Humble Trove.
Amin'ny maha-mpikambana anao ao amin'ny Humble Choice dia mbola azonao atao ny misintona azy ireo hotehirizina ho an'ny fanangonanao manokana hatramin'ny 31 Janoary. Mbola ho hita ao anatin'ny app Humble vaovao ho an'ireo mampiasa Windows izy ireo.
Ny lalao rehetra izay nozaraina tamin'ity sehatra ity tamin'ny alàlan'ny sehatra hafa, na Origin na Steam, tsy hisy fiantraikany amin'ity fepetra vaovao ity.
Ireo mpampiasa izay nanana fanantenana izany ity sehatra ity dia noraisina tamin'ny sandry misokatra anaram-boninahitra be dia be miaraka amin'ny fandefasana ny Apple Silicon, dia efa azo adino.
Araka ny filazan'ny mpamorona Steve Troughton:
Mampalahelo tokoa ny mahita ny fisondrotan'ny tontolon'ny lalao Mac. Nandoro tetezana be dia be i Apple tamin'ny hack 32-bit, ny fahatapahan'ny fanohanan'ny OpenGL, ary ny fanomezan-dàlana tsy maintsy atao. Tsy lazaina intsony ny fahombiazan'ny GPU amin'ny vidiny mirary.
Ny fiankinan-doha amin'ny lalao iOS dia tsy mahasakana an'io fironana miely patrana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny famandrihana lalao video manetry tena dia hanakana ny fanohanan'ny Mac
Nilaza i Gurman fa niasa tamin'ny HomePod mandeha amin'ny bateria i Apple